My Blog | ကျွန်တော့်အတွေး ကျွန်တော့်အမြင်
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် – သင်ရိုးအကျဉ်းမှတ်စု
၂၀၁၂- ခုနှစ် စင်္ကာပူနိုင်ငံ စင်္ကာပူမြို့၏ အရုဏ်တက်ချိန်ဇယား (စင်္ကာပူ ဒေသစံတော်ချိန်)
ကိုယ့်အောက်ကျတဲ့သူကို ကြည့်ပြီးတော့ မာနဖြစ်ရမယ်
ကိုယ်ထက်သာတဲ့သူကို ကြည့်ပြီးတော့ က္ကသာ၊ မစ္ဆရိယ ဖြစ်ရမယ်
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြည့်ပြီးတော့ ဒိဋ္ဌိ ဖြစ်ရမယ်
အလှအပကို ကြည့်ပြီးတော့ လောဘ ဖြစ်ရမယ်
အနိဌာရုံတွေ ကြည့်ပြီးတော့ ဒေါသတွေ ဖြစ်ရမယ်
မြင်နေကြ အာရုံတွေ ကြည့်ပြီးတော့ မောဟတွေ ဖြစ်ရမယ်
ကိုယ့်လုပ်ရပ်တွေကို ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ ကုက္ကုစ္စ ဖြစ်ရမယ်……
ဘယ်လိုကြည့်ရတယ်ဆိုတာကို သင်ကြားတတ်မြောက်ဖို့ကတော့ အရေးအကြီးဆုံးပဲ….
အဲဒါဆိုရင် ဘာကို ကြည့်ကြည့်အရေးမကြီးတော့ဘူး….
***** မှတ်ချက်။ ။ အမှား၊ အမှန် ချင့်ချိန်ယုံကြရန်..
Categories : အရေးကြီးပုံ
ငါက လေတံခွန်တစ်ကောင် ထိန်းသမား
လေတံခွန်ကွ.. လေမှာ တံခွန်လို လွင့်ဖို့.
ငါကပဲ ငါ့ဟာငါ စဉ်းစားဦးမယ်.
ငါကတော့ ငါ့အထင်နဲ့ငါ ငါ့ဘ၀င်နဲ့ငါ
ငါ… ပြန်ဆွဲဖို့ သတိရတော့တယ်..
အပေါ်လေကိုဘယ်မှာ ငါ… သိခဲ့ဘူးမှာလဲ..
ငါလွတ်လိုက်တာ ကြိုးကုန်လုမတတ်ပဲ ဆိုတာသိတော့တယ်.
လုံးရာက ပါး, ပါး လာတော့မှပဲ
ပရုတ်လုံး ဖြစ်မှန်း သိတော့တယ်..
ရှိတဲ့ကြိုးနဲ့ လေကို အံမတုနိုင်
ရှေ့မှာချောက် နောက်မှာ အမြှောက်
Categories : ကဗျာ
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ၊ ကမ္မံ သတ္တေ ၀ိဘဇ္ဇတိ
“ကမ္မံ သတ္တေ ၀ိဘဇ္ဇတိ” တဲ့..
ကံ၏အကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ကြတာလား..ဒီလိုပဲပြောနေကြတာပဲလား.. ကံဖြစ်တိုင်းလည်း သတ္တ၀ါဖြစ်ရတော့မလား.. သေသေချာချာတော့ လေ့လာကြည့်သင့်တယ်..
ကံဖြစ်လို့ သတ္တ၀ါဖြစ်တာလား.. သတ္တ၀ါက ကံကြောင့်ဖြစ်တာလားလို့..
ကံကြောင့်သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်ဆိုရင် ကံဖြစ်ရင် သတ္တ၀ါဖြစ်တော့မယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်ထွက်မှာပဲ..
ကံကလည်း မဖြစ်ပါနဲ့ဆိုလို့လည်းမရဘူးလေ.. ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံက တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခု ထွက်နေမှာပဲလေ..
ဒါဆိုလည်း.. ဘာကံလုပ်ပြီး ဘာဖြစ်ပါစေ ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါတော့..
သတ္တ၀ါတွေက ကံကြောင့် ဖြစ်တာလား ဆိုတာလေးပါ..
သတ္တ၀ါတွေကို ကြည့်ပြီးတော့ ကံကြောင့် ဖြစ်တာလို့ ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာမှ မပြောလိုပါဘူး..
”သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ” ကိုး..
နောက်တစ်ခုက. ကမ္မဘ၀ ပစ္စယာ ဇာတိ လာတာကိုး..
ဒါကိုတော့ ဘာမှ ထောက်စရာ မရှိပါဘူး..
ကံဖြစ်တိုင်း သတ္တ၀ါ ဖြစ်မယ်လို့ ရောယူထားတာကိုပါ…
ဒီနှစ်ခုက သေချာမခွဲခြားတတ်ရင် ရောနေလိမ့်မယ်..
ဘာရောတာလဲဆိုတော့ အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပုန် နဲ့ အနာဂါတ်တွေနဲ့ ရောလိုက်တာပါပဲ.
လက်ရှိ သတ္တ၀ါတွေက အတိတ် ကံကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့…ဒါကြောင့်ကံဖြစ်ရင် သတ္တ၀ါဖြစ်တာပဲ..
အခုလက်ရှိ ကံဖြစ်ရင် အနာဂါတ် သတ္တ၀ါဖြစ်တယ်ဆိုပြီး ကာလတွေ အားလုံးကို အတူတူယူလိုက်ကြတော့တာပါပဲ..
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပုန် နဲ့ အနာဂါတ်တွေ သေချာ မပိုင်းခြားတတ်ရင် သေချာပေါက် ရောပါတယ်..
အတိတ်ကံကြောင့် ပစ္စုပ္ပုန်ခန္ဓာ၊ ပစ္စုပ္ပုန်ကံကြောင့် အနာဂါတ်ခန္ဓာ
အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပုန် နဲ့ အနာဂါတ်တွေ ခွဲခြားတတ်ပြီပဲ..
ကံကြောင့် ဖြစ်တာလား ဆိုတာ လာပါတော့မယ်.. သတ္တ၀ါတွေလေ.
ှုဥပါဒါန ပစ္စယာ ဘဝေါ တဲ့.. (ဘဝေါ = ကမ္မဘ၀ = ကံ)
ဥပါဒါန် ဖြစ်ရင် ကံဖြစ်တယ်တဲ့..
ကံဖြစ်ရင်တော့ ဇာတိ ဆိုပြီး သတ္တ၀ါ ဆိုတဲ့ ပညတ်စတာပဲ..
ဥပါဒါန်က ကံကို ဖြစ်စေတယ်.. ကံက သတ္တ၀ါဖြစ်စေတယ်
အဲဒီတော့ သတ္တ၀ါက ကံ က ဖြစ်တာလား.. ဥပါဒန်က ဖြစ်တာလား.. ဆိုတာစဉ်းစားကြည့်..
ကံဖြစ်ရင် သတ္တ၀ါဖြစ်တယ် ဆိုတာ ကို သေချာ ကွဲပြားစေချင်လို့ပါ..
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ချို့က ကံတော့ ဖြစ်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်. သတ္တ၀ါ မဖြစ်တော့ပါဘူး..
ဥပမာ.. ဥပါဒါန် မရှိတော့တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်.. ကံတော့ ဖြစ်တယ်.. အဲဒီကံက သတ္တ၀ါမဖြစ်တော့ဘူး..
အဲဒီတော့ ကံက သတ္တ၀ါဖြစ်တာလား. ဥပါဒါန်က သတ္တ၀ါဖြစ်တာလားဆိုတာ့ ပေါ်လာပြီပဲ..
ဥပါဒါန်ကတော့ သတ္တ၀ါကိုတော့ တိုက်ရိုက်မဖြစ်စေပါဘူး..
ဘာကံလဲဆိုတာ့ ဥပါဒါန်နဲ့လုပ်တဲ့ကံ…ဥပါဒါန်ကင်းပြီးလုပ်တဲ့ ကံဆိုပြီး ကွာသွားတယ်..
ဥပါဒါန်နဲ့ လုပ်တဲ့ ကံ ဆိုရင် ဥပါဒါနပစ္စယာဘဝေါ၊ ဘ၀ပစ္စယာ ဇာတိဆိုပြီး.. အနာဂါတ် သတ္တ၀ါဖြစ်ပါဘယ်..
ဥပါဒါန်ကင်း ပြီးလုပ်တဲ့ ကံဆိုရင် ဥပါဒါန နိရောဓါ ဘ၀နိရောဓေါ၊ ဘ၀ နိရောဓါ ဇာတိနိရောဓေါ ဆိုပြီး အနာဂါတ် သတ္တ၀ါ အဖြစ်မှကင်းပါတယ်…
ဥပါဒါန နိရောဓါ ဘ၀နိရောဓေါ ကိုး..
ဥပါဒါန် မရှိရင် ကံမရှိပါဘူးတဲ့… ဇာတိဖြစ်စေတဲ့ ကံကိုပြောတာ..
ဘ၀နိရောဓါ ဇာတိနိရောဓေါ ဆိုပြီး.. သတ္တ၀ါ ပညတ်ဇာတ်သိမ်းပါတယ်…
သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ လုံးမချ စေချင်လို့ ဒါကို ထုတ်လာရတာပါ.
ကံက လုပ်တာဆိုပေမယ့် သူ့ကို ဥပါဒါန်က အုပ်ချုပ်ထားတယ် ဆိုတာ သိအောင်လို့ပါ..
ဒါကြောင့် ကံက တရားခံလား.. ဥပါဒါန်က တရားခံ လားဆိုပြီး.. လက်သည်ရှာကြည့်လိုက်ပါ..
ဥပါဒါန်ရှိနေသ၍ ဥပါဒါန်နဲ့ကံတွေလုပ်ပြီး ဇာတိလာမှာပဲ..
ဥပါဒါန်မရှိတော့ရင် ဥပါဒါန်နဲ့လုပ်တဲ့ ကံတွေလည်းကင်းပြီး.. ဆိုင်ရာဇာတိချုပ်တာပဲ..
ကံသည် သတ္တ၀ါကို ဖြစ်စေ၏ ဆိုတဲ့နေရာမှာ
ဥပါဒါန်တွဲနေတဲ့ကံ ပေါ်မူတည်ပြီး သတ္တ၀ါ ဖြစ်တယ် မဖြစ်ဘူး လို့ပြောရတော့မှာပဲ….
“သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ၊ ကမ္မံ သတ္တေ ၀ိဘဇ္ဇတိ” လို့ လုံးမချခင် ကိုယ်လုပ်တဲ့ကံက ဥပါဒါန်နဲ့လား.. ဥပါဒါန်ကင်းလားဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပြီးတော့ ဘာဖြစ်ပါစေ ညာဖြစ်ပါစေလုပ်ပေါ့….
“သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ၊ ကမ္မံ သတ္တေ ၀ိဘဇ္ဇတိ”
“ဥပါဒါနပစ္စယာ ဘဝေါ၊ ဘ၀ပစ္စယာ ဇာတိ”
“ဥပါဒါနနိရောဓါ ဘ၀နိရောဓေါ၊ ဘ၀နိရောဓါ ဇာတိနိရောဓေါ” ကို ယှဉ်တွဲပြီး နားလည်သလို ဝေဖန်သုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်..
ကာမုပါဒါန်၊ ဒိဋ္ဌုပါဒါန်၊ သီလဗ္ဗတုပါဒါန်၊ အတ္တဝါဒုပါဒါန်
မှတ်ချက်။ ။ ရေးချင်တာတွေ သိသလို ရေးထားသောကြောင့် အမှား အမှန်ကို ချင့်ချိန် ယုံကြရန်…..
အမှားဖတ်ပြီး အပြစ်ဖြစ်ခြင်းအတွက် တာဝန်မယူ…….
Categories : ကံ, သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ ၊ ကမ္မံ သတ္တေ ၀ိဘဇ္ဇတိ